Madaxdii mucaaradka oo la codsaday in toogasho lagu xukumo.
Muslimiin ku baaqay in la joojiyo dadka Kenya lag aafduubayo.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in xukunkii degdegga ahaa dhamaaday.
Wargaysyada caalamka iyo waxay ka qoreen Ogadenya.
Xerilaaliyaha maxkamad ku sheeg ay Itoobiya saarayso madaxda xisbiga mucaaradka ee CUD ayaa maxkamad ku sheegta ka codsaday in toogasho lagu xukumo. Madaxdan mucaaradk ah, oo tiradoodu gaadhyso 38 qof, ayaa dhawaan la sheegay in lagu soo caddeeyay in ku lug-lahaayeen gadoodkii dadwayne ee ka dhashay musuqmaasuqii ay xukumadda Zenawi ku samaysay doorashadii la qabtay bishii May 2005.
Xeerilaaliyahan, oo lagu magacaabo Abraham Tetemke, ayaa sheegay in madaxda mucaaradka ee maxkamad ku sheegtan la saarayo ay iski dayeen inay dowlada inqilaabaan. Madaxdan waxaa ka mid ah dhawr xubnood oo baarlamaanka loo doortay oo ka mid yahay Berhanu Negga, oo ah ninkii loo doortay guddoomiyanimada magaalada Addis Ababa.
Madaxdan mucaaradka ee 38-ka ah waxaa markii hore lagu soo eedeeyay denbiyada ay ka midka yihiin khiyaamo qaran iyo xasuuq, wuxuuna qaadigu ku talajiray inuu xukunka ku dhawaaqo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu muddo toddobaad ahba fursad siinayay eedaysanayaasha inay ka jawaabaan dacwada xeerilaaliyuhu ku soo oogay.
Hase yeeshee waxay diideen inay aqoonsadaan maxkamad ku sheegta la saarayo oo ay iska difaacaan denbiyada lagu soo oogay. Dadkan waxaa lala xidhay dad kale oo boqol ka badan, kuwaasoo isugu jiray madax mucaaradka ka tirsan, suxufiyin iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka.
Xukuumadda Itoobiya ayaa beesha caalamku hadda billowday inay ka hadasho xadgudubyada faraha badan ee ay u gaysato dadwaynaha rayadka ah oo ay ugu horreeyaan kuwa soomaalida Ogaadeenya oo wixii hadda ka horreeyay ayna jirin cid ka hadli jirtay denbiyada waawayn ee ciidamma Itoobiya ka gaystaan dalka Ogaadeenya.
Intii ka denbaysay soo bixiddii warbixintii xaqiiqada ahayd ee Human Rights Wacth ay ka soo saartay xadgudubyada ciidammada Itoobiya ka gaysanayaan Ogaadeenya, waxay qaar badan oo warbaahinta caalamka ka mid ahi billaabeen inay hadlaan waxyaabaha ka dhacay Ogaadeenya, iyadoo wargaysyada waawayn ee adduunka lagu soo daabaco warbixino arrimahaas ka hadlaya, isla markaana dowlada Maraykanka lagu canaanto xidhiidhka ay la leedahay xukuumada Itoobiya oo ku caan-baxday ku xadgudubka xuquuqda aadanaha.
Dad badan oo uslimiin ah ayaa ku baaqay in la joojiyo dadka sida qarsoodiga ah looga afduubo dalka Kenya ee la geeyo Soomaaliya iyo Itoobiya. Dad aad u tira badan ayaa si qarsoodi ah looga qaadaa dalka Kenya, loona dhoofiyaa Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo ay arrintu u muuqato hawlgal wadajir ah oo lagu fuliyo dad ay tuhmaado ka soo galeen dowladaha Soomaaliya, Itoobiya iyo waliba Maraykanka.
Hooggaamiye u hadlay muslimiinta Kenya ayaa sheegay in dad badan oo loo tarxiilay dhinaca Soomaaliya loo sii gudbiyay Itoobiya, laakiin aan si dhab ah loo garanaynin meesha ay Itoobiya aga xidhan yihiin.
Wuxuu kaloo sheegay in qaar badan oo dadkaas ka mid ahi ay ehaladooda la soo xidhiidheen markii Itoobiya loo afduubayay, isla markaana ay u sheegeen inay la xidhan yihiin dad kale oo fara badan oo iyagana Kenya laga tarxiilay.
Dadka noocaas ah ee Kenya laga soo afduubay, ka dibna Itoobiya loo gacan galiyay waxaa ka mid ah ganacsade reer Ogaadeenya ah oo lagu magacaabo Bashiir Axmed Makhtal, kaasoo la sheegay inuu hadda ku xidhan yahay xabsi ku yaalla nawaaxiga Addis Ababa, isla markaana xadgudubyo kala duwan loo gaystay, looguna hanjabay in la dilayo. Ninkan oo haysta dhalashada Canada ayaan ilaa iyo hadda xaaladdiisa laga warhaynin, loona oggolaanin in cidi aragto. Dowlada Canada ayaan iyaduna ilaa iyo hadda tallaabo macquul ah oo la garaysan karo ka qaadin.
Guddoomiyaha Baarlamanka Somaliya Sheikh Aadan Madoobe ayaa markii ugu horraysay sheegay inuu dhamaaday xukunkii degdegga ahaa ee dalka lagu soo rogay xilli hore, isla markaana uu Baarlamanku hadda qabsanayo howlihiisa caadiga ahaa.
Hadalkaan ayuu Sheekh Aadan Madoobe sheegay markii uu daba-yaaqadii toddobaadkii hore dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta u ah dowladda ku meelgaadhka ah ee Somaliya.
Sheekh Aadan Madoobe ayaa intaasi raaciyay in Baarlamanka Soomaaliya uu maalmahan kulamo ka yeelan doono arrimaha Somaliya, kana hadli doono arrimo muhiim ah oo khuseeya xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya.
Dad fara badan ayaa walaac ka muujiyay xukunka degdegga ah oo awoodo dheeraad ah siinayay madaxwaynaha, isla markaana ciidammada rukhsad loo siiyay inay dili karaan qofkii ay ka shakiyaan ama baadhi karaan meel ay tuhmaan. Hadalka Sheekh Aaden madoobe ayaa ku soo hagaagay xilli uu qalalaase lixaad lahi ka jiro guud ahaanba dalka Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha nabadgelyada ee magaalada Muqdisho.